iOS 15 Mamela ny mpampiasa hangataka famerenam-bola amin'ny fividianana rindrambaiko amin'ny fampiharana | Vaovao IPhone
Ny iOS 15 dia mamela ny mpampiasa hangataka famerenam-bola amin'ny fividianana fampiharana amin'ny fampiharana
Ny fividianana fampiharana ao anaty fampiharana dia mahazatra, toa izany na tsia, ary toa tsy ho ela dia handeha ireo. Ny olana sedrain'ireo mpampiasa cakoho tsy nahy nividy izy ireo na ny iray amin'ireo zanakao manao an'io, dia ny mifandray amin'i Apple hangataka famerenam-bola.
Fantatr'i Apple fa tsy ny tsara indrindra ny fizotrany ary amin'ny iOS 15 dia nanampy safidy vaovao ahafahan'ny mpampiasa mampiasa izy mangataha famerenam-bola amin'ny fividianana rindrambaiko avy ao anaty ny fampiharana mihitsy misaotra ny API StoreKit vaovao izay tsy maintsy ampiharin'ny mpamorona rehetra.
Ireo mpampivelatra dia tsy maintsy mampihatra an'io fampiasa vaovao io ao anatin'ny fampiharana azy. Ity safidy ity dia haseho amin'ny alàlan'ny bokotra Mangataka famerenam-bola. Amin'ny alàlan'ny fanindriana io safidy io dia tsy maintsy asehontsika hoe inona ny olana izay angatahinay ny famerenanana ny fividianana izay efa nataonay.
Azontsika atao ihany koa ny mahafantatra amin'ny fotoana rehetra ny satan'ny fangatahana amin'ny alàlan'ny tranokala omen'i Apple antsika Tatero ny olana amin'ny fangatahana iray.
Rehefa nandefa ny fangatahana izahay, ny mpanjifa dia hahazo mailaka avy amin'i Apple amin'izay ianao dia hampahafantatra anay ny satan'ny fangatahana fiverenana. Raha mifandraika amin'ny vola madinika amin'ny lalao ny fividianana ary nandany azy izahay dia efa afaka hadino ny mangataka famerenam-bola.
Apple dia nandefa ny beta voalohany an'ny iOS 15 tamin'ny alatsinainy lasa teo, beta izay mampiseho amin'izao fotoana izao a fitoniana mahafinaritraNa izany aza, tsara kokoa ny miandry ny herinandro voalohan'ny volana Jolay, herinandro hanokafan'ny Apple ny iOS 15 betas ho an'ireo mpampiasa ny programa beta-bahoaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Ny iOS 15 dia mamela ny mpampiasa hangataka famerenam-bola amin'ny fividianana fampiharana amin'ny fampiharana
Fitsapana bateria eo anelanelan'ny iOS 14.6 sy iOS 15 beta 1